Asịrị ọ bụ mmehie? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Machị 27, 2021
Asịrị ọ bụ mmehie? Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka asịrị, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịkọwa ihe ọ bụ, ya mere, nke a bụ nkọwa si n’akwụkwọ ọkọ asịrị. "Mkparịta ụka nkịtị ma ọ bụ mkparịta ụka na-enweghị njide ma ọ bụ akụkọ banyere ndị ọzọ, na-etinyekarị nkọwa na-akwadoghị ịbụ eziokwu."
Echere m na ụfọdụ nwere ike ihie ụzọ nke iche na asịrị bụ ịgbasa ụgha ma ọ bụ ụgha. Nke a abụghị eziokwu kpamkpam. Aga m asị na ọtụtụ oge ka a na-agbasa asịrị n'eziokwu. Nsogbu ya bụ na ọ nwere ike ịbụ eziokwu na-ezughi ezu. Otú ọ dị, eziokwu ahụ, zuru ezu ma ọ bụ ezughi ezu, na-eji ekwu maka onye ọzọ.
Ihe Baịbụl na-ekwu banyere asịrị bụ eziokwu na amaokwu na-egosi ihe ịgba asịrị bụ n’akwụkwọ Ilu. “Asịrị na-arafu ntụkwasị obi, ma onye kwesịrị ntụkwasị obi na-ezobe ihe nzuzo” (Ilu 11:13).
Amaokwu a chịkọtara ihe asịrị bụ: aghụghọ. O nwere ike ọ gaghị abụ ire mmadụ n’omume, mana ọ bụ ịgba mgba okpuru n’okwu. Otu n’ime ihe mere o jiri bụrụ ịgba ọchịchị mgba okpuru bụ na ọ na-eme n’abụghị onye a na-akọ asịrị.
Nke a bụ usoro dị mfe nke isi mkpịsị aka. Ọ bụrụ na ị na-ekwu maka onye na-anọghị ya, ohere ị ga-aba nwere ike ịdaba asịrị. M ga-asị na ọ nwere ike ime ụma ma ọ bụ na ọ gaghị eme. N’agbanyeghi otu I rutere ebe ahụ, ọ bụ asịrị ọ bụla, nke pụtara na ọ bụ aghụghọ.
Asịrị ọ bụ mmehie? Azịza
Iji zaa ajuju ma asịrị ọ bụ mmehie, achọrọ m ka ị tulee ajụjụ ndị a. You na-achọ iwulite ma ọ bụ kwatuo? Na-arụ ụlọ ahụ ka ị na-adọrisị ya? Ihe ị na-ekwu ọ̀ ga-eme ka mmadụ chee echiche banyere onye ọzọ n’ụzọ dị iche? ̀ ga-achọ ka mmadụ kwuo banyere gị otú i si ekwu banyere onye ahụ?
Asịrị ọ bụ mmehie? Kwesighi ịbụ ọkà mmụta Bible iji mara na asịrị bụ mmehie. Asịrị kewara. Asịrị na-emebi ihe. Asịrị kwujọrọ. Asịrị na-egbu mmadụ. Typesdị omume ndị a na-emegide otu Chineke chọrọ ka anyị si na-emekọrịta ihe ma na-agwa ibe anyị okwu. E boro anyị ebubo ịdị obiọma na ọmịiko n’ebe ibe anyị nọ. Anụbeghị m okwu asịrị ole na ole dabara na njirisi ndị a.
"Ekwela ka okwu nzuzu ọ bụla si n'ọnụ gị pụta, kama ọ bụ naanị ihe bara uru iji wulie ndị ọzọ elu dị ka mkpa ha si dị, ka o wee baara ndị na-anụ uru" (Ndị Efesọs 4:29).